LAPHA kunye neLoqate yandisa intsebenziswano ukunceda iinkampani ukuba zenze uhambiso-lweGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/LAPHA kunye neLoqate Yandisa ubuhlakani ukuncedisa amashishini enza ukuba ukuhanjiswa kungeniswe
IiphotographyGeospatial - GIS
APHA IiteknolojiIdatha yendawo kunye neqonga lobuchwephesha, kunye neLoqate, umphuhlisi ophambili wokuqinisekiswa kweedilesi zomhlaba kunye nezisombululo zejogu, babhengeze intsebenziswano eyandisiweyo ukubonelela amashishini ngokufumana idilesi, ukuqinisekiswa, kunye netekhnoloji ye-geocoding. Amashishini akuwo onke amashishini afuna idatha yedilesi eqinisekisiweyo yemisebenzi yemihla ngemihla, ngakumbi ukuthengisa, ukuthutha kunye nempahla, iinkonzo zezimali, kunye nokhathalelo lwempilo.
I-Loqate iyaqhubeka nokudibanisa APHA idatha yemephu, i-geocoder, kunye neendlela zokwenza i-algorithms kwindawo yayo yokusetyenziswa kwedilesi kunye nesoftware yokuqinisekisa. Intsebenziswano eyandisiweyo inceda iinkampani zakhe izisombululo ezizidingayo ukuze zikwazi ukuhambisa iimveliso zazo, iinkonzo kunye nokubandakanyeka kwabathengi ngokubanzi.
"Ubudlelwane obunzulu be-Loqate kunye APHA, iingcali ezikhokelayo kwiimephu zamazwe ngamazwe kunye neenkcukacha zendawo, zisivumela ukuba sinikeze izisombululo eziphambili kwiimarike kwaye sisondele kumaqabane ethu kunye nabathengi," utshilo uJustin Duling, uSekela Mongameli oPhezulu weLoqate kunye neGosa eliyiNtloko lezoRhwebo. "Sijonge phambili ekwandiseni intsebenziswano yethu APHA ukuphendula kwiimeko zokusetyenziswa kwedatha yendawo kwixesha elizayo kumaqabane ethu kunye nabathengi."
Ukuguqulwa kwedijithali kweedilesi zeposi kubude obuchanekileyo kunye neendawo zobude ezicwangciswe kwimephu (geocoding) iye yaba sisixhobo esibalulekileyo kwishishini lemihla ngemihla. Njengokuba uhambo lwabathengi luye lwandiswa ngakumbi, idatha yendawo iya kuba luphawu olubalulekileyo lokuhambisa amava aphezulu.
"Yonke imihla, ehlabathini lonke, izigidi zeedilesi zirekhodwa okanye zifundwe ngabantu kunye neekhomputha, zonke ezo zifuna ukuqinisekiswa okupheleleyo kunye nokuchaneka," watsho uJason Bettinger, iNtloko yeeNkonzo zokuThengisa kunye nezeMali kwi-HERE Technologies. "Siyavuya ukwandisa ubambiswano lwethu oluqhubekayo kunye ne-Loqate njengoko sidibanisa itekhnoloji yendawo yodidi oluphezulu ukuqinisekisa ukuba amashishini asebenza kuphela ngedatha yendawo ephuculweyo neqinisekisiweyo kwiimfuno zabo zangaphakathi kunye nabathengi."
LAPHA imephu inezinto ezininzi zedatha, ezinje ngemida yeposi kunye neyolawulo, iidilesi, uthungelwano lwendlela kunye neenkqubo zothutho, amanqaku anomdla, nokunye okuninzi. Idatha iya kuphucula ubuchule bokulungiswa kwedatha I-Loqate eyila idatha yereferensi yepremiyamu esetyenziswe kukufakwa kwedilesi yehlabathi kunye netekhnoloji yokuqinisekisa.
Namhlanje, i-Loqate inikezela ngesisombululo sokuqinisekisa sedilesi yehlabathi, eyenziwe ngezinto ezimbini, zixhaswe ngababoneleli beenkcukacha zehlabathi eziphambili:
1) Ukubamba, imveliso yokubhala kwangaphambili kwangaphambili evumela ukubanjwa kwedilesi esebenzisana nayo nayiphi na idilesi yehlabathi ngexesha lokwenyani ledatha entsha, kunye
2) Qinisekisa, imveliso enokuqhubeka nokuhlaziya, ukuqinisekisa kunye nokuphucula iidilesi zedatha, ukongeza i-geocoding, kunye nokubuyisela i-geocoding kwezi rekhodi zingqinisisiweyo.